Kuenda kuUS? COVID muganho matanho anoramba aripo kana iwe uchidzokera kuCanada
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuenda kuUS? COVID muganho matanho anoramba aripo kana iwe uchidzokera kuCanada
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Kuenda kuUS? COVID muganho matanho anoramba aripo kana vafambi vadzokera kuCanada.
Vagari vekuCanada vanogona kutarisa nepurovhinzi yavo yekumba kana dunhu nezve kuwana COVID-19 humbowo hwekudzivirira kuti vadzokere kuCanada.
Vafambi vanofanirwa kutarisa kana vachikodzera kupinda muCanada uye vagozadzisa zvese zvinodiwa zvekupinda vasati vaenda kumuganhu.
Vafambi vakabayiwa zvizere vanokodzera kupinda muCanada vanoramba vachitarisirwa kuongororwa zvisina tsarukano pakusvika.
Maantigen bvunzo, anowanzonzi "kukurumidza bvunzo", haagamuchirwe.
Musi waMbudzi 8, 2021, United States ichatanga kubvumidza vafambi vakabayiwa zvizere kubva kuCanada kuti vapinde muUnited States panzvimbo dzepasi nepachikepe dzekupinda nekuda kwezvikonzero (zvisina kukosha), senge kushanya.
Canada Border Services Agency inoda kuyeuchidza vafambi kuti matanho emuganho anoramba aripo kune vafambi vanopinda kana kudzoka kuCanada uye kuti vanofanirwa kuziva nekunzwisisa zvavanosungirwa kuita pavanenge vachironga rwendo rwavo.
Vafambi vanofanira kutarisa kana vachikodzera kupinda Kanadha uye kuita zvese zvinodiwa pakupinda usati waenda kubhodha. Vagari vekuCanada vanogona kutarisa nepurovhinzi yavo yekumba kana dunhu nezve kuwana COVID-19 humbowo hwekudzivirira kuti vadzokere kuCanada.
Vafambi vane nhomba yakakwana vanouya kuCanada vanofanirwa kupedzisa pre-kusvika molecular COVID-19 bvunzo uye vaendese ruzivo rwavo rwekusungirwa kusanganisira yavo yedhijitari humbowo hwekudzivirira muChirungu kana French vachishandisa yemahara. ArriveCAN (App kana webhusaiti) mukati maawa makumi manomwe nemaviri asati asvika Kanadha. Maantigen bvunzo, anowanzonzi "kukurumidza bvunzo", haagamuchirwe. Vafambi vakabayiwa zvizere vanokodzera kupinda muCanada vanoramba vachitarisirwa kuongororwa zvisina tsarukano pakusvika.
Kwenzendo pfupi, dzisingasviki maawa makumi manomwe nemaviri, vagari vekuCanada, vanhu vakanyoreswa pasi pemutemo weIndia, vagari zvachose uye vanhu vakachengetedzwa vanoenda kuUnited States vanobvumidzwa kutora bvunzo yavo isati yasvika vasati vabva kuCanada. Kana bvunzo yacho yadarika maawa makumi manomwe nemaviri kana vapindazve muCanada, vanozodikanwa kuti vatore bvunzo nyowani isati yasvika yekuUnited States.
Vafambi vasina nhomba kana vabaiwa zvishoma vanokodzera kupinda Kanadha inofanirwa kuenderera mberi nekutevera kusati kwasvika, kusvika uye Zuva-8 molecular COVID-19 yekuongorora zvinodiwa, uye kugara wega kwemazuva gumi nemana.
Vafambi vanogona kunonoka pazviteshi zvekupinda nekuda kwehutano hweveruzhinji sezvo CBSA isingakanganise hutano nekuchengetedzeka kwevaCanada nekuda kwekumirira nguva. Iyo CBSA inotenda vafambi nekubatana kwavo uye moyo murefu.
Yese mibvunzo pamusoro pekupinda kweUS uye zvinodiwa zvehutano, zvinofanirwa kunangana kuUS Customs uye Border Dziviriro.